Madaxweyne Dalka Turkiga Erdogan oo shaaciyey inuu Xidhiidhka u jaraayo Imaraadka+Halka Sartu ka qudhuntaya | Qaran News
Madaxweyne Dalka Turkiga Erdogan oo shaaciyey inuu Xidhiidhka u jaraayo Imaraadka+Halka Sartu ka qudhuntaya
Writen by Qaran News | 2:57 am 15th Aug, 2020
Madaxweyne Dalka Turkiga Erdogan oo si kulul uga hadlay heshiiska Imaaraatka carabta & Israa’iil
Israa’iil iyo dalka imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiis si dib loogu soo celiyo xiriirka labada dhinac. Israa’iil ayaa waxay aqbashay inay joojiso qorsheeda ay isku sii ballaarinayso qeybo ka mid ah daanta galbeed.
Bayaan la yaab lahaa ayaa waxaa uu madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump, oo hsehiiskan gar-wadeen ka ahaa ayaa waxay dalalka heshiiska ku tilmaameen “mid taariikhi ah” iyo guul nabadeed. Isra’iil ayaa wixii imika ka horeeyay aan wax xiriir ah la lahayn dalalka Carbeed ee gacanka.
Balse waxay Israa’iil iyo dalalkan wadaagaan walaaca ay ka qabaan Iiraan taasi oo sababtay in ay yeeshaan xiriir aan rasmi ahayn.
Hogaamiyayaasha Falastiiniyiinta ayaa la sheegay inay tallaabadani ay la yaab ku noqotay .
Afhayeen u hadlay madaxwaynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbas ayaa heshiiskan ku tilmaamay ” khiyaano qaran “, islamarkana waxaa dib loogu yeeray safiirkii Falastiin u fadhiyay Imaaraadka.
Madaxwayne Trump ayaa heshiiskan u dhaxeeya rai’sul wasaare Netanyahu iyo boqorka Imaaraadka Mohammed Al Nahyan ku tilmaamay”waqti taariikhi ah “.
Waa heshiiskii saddexaad ee ay gaaraan israa’iil iyo Carabta tan iyo intii sanaddii1948, lagu dhawaaqay madaxbanaanida Israa’iil .
Benjamin Netanyahu iyo Mohammed Al Nahyan